Te Imwe Mudziyo: Iri bhuku rinotitaurira iro rakavanzika nhoroondo yeiyo iPhone | IPhone nhau
Te Imwe Mudziyo: Iri bhuku rinotitaurira iro rakavanzika nhoroondo yeiyo iPhone
Apple yaive imwe kambani kumashure muna 2000, hatina mubvunzo nazvo. Chakavanzika, vakadzidza vepamusoro uye pamusoro pezvese guru, Steve Jobs semugadziri wepamusoro wekuti vatengi zvemagetsi vanga vasisiri zvishandiso, ruzivo rwevashandisi rwakatanga kuita zvine musoro kekutanga munhoroondo. Iyi ndiyo nzira kwete yekutanga, asi yakakosha yemapiyona mu smart telephony, akazvarwa., Yekutanga iPhone.
Nekudaro, kunyangwe hazvo waona akawanda zvinyorwa uye ukaverenga huwandu hukuru hwemabhuku nezvenyaya iyi, panogara paine kusahadzika kukuru pamusoro peizvo chaizvo zvaive kumashure kwekusikwa kweiyi iPhone izvo zvisina kana munhu aitarisira, uye kuti angangoita makore gumi gare gare, vachifungidzira kuti inoramba ichiviga gore negore. Iye Mumwe Mudziyo ibhuku rinovavarira kutaurira yakavanzika nyaya seri kwekugadzirwa kweiyo iPhone.
Aya ndiwo marondedzero anoita Evan Doll iyo nyaya isati yasikwa iyo iPhone, chakavanzika chatisina kana nhasi:
Dai iwe wakashanda kuApple muma2000, iwe ungadai wakacherekedza kuti chimwe chinhu chinoshamisa chiri kuitika: vanhu vanyangarika Pakutanga zvainonoka, rimwe zuva kwaive nechigaro chisina chinhu chaimbogara nenjinjini akangwara, zuva raitevera nhengo yakakosha yechikwata yakanga yaenda, uye hatina kumboziva kuti kupi kana nei.
Izvo zvaisanyatso kujeka izvo zvavaigadzira, runyerekupe rwaisvika kwandiri, asi zvaive pachena kuti mainjiniya kubva kumapoka akanakisa aive akatarisana nebasa iri.
Iri bhuku rinosvika muChirungu kubva € 15,67 paAmazon kubva munaJune 22, Inogona kutochengeterwa, kunyangwe isu tisina ruzivo nezveSpanish vhezheni yacho. Brian Merchant akashanda nesimba kuti atinzwisise zvaibika paApple mumakore akatungamira kuchiitiko ichi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Te Imwe Mudziyo: Iri bhuku rinotitaurira iro rakavanzika nhoroondo yeiyo iPhone
Isu takaedza iyo Zecti mini tripod yekufamba